Fashion – Page4– OOTDMYANMAR
SEXY AND CUTE DRESSES FOR VALENTINE’S DAY
No Comments on SEXY AND CUTE DRESSES FOR VALENTINE’S DAY
ချစ်သူများနေ့အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဝတ်စုံလေးတွေ
We know what’s on your mind: “Valentine’s Day is near, and you don’t want to show up on your date looking likeahot mess.”
So, if you’re still on the hunt for the perfect dress to show your assets for the occasion, here are dresses worth your MMK from MDS Myanmar!
အချစ်တို့စိတ်ထဲမှာဘာတွေတွေးနေလည်းဆိုတာ OOTD က သိနေတယ်နော်။ ချစ်သူများနေ့က နီးလာပြီ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်လက်တွဲဖော်နဲ့ချိန်းတွေ့တဲ့နေ့လေးမှာ အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ကပိုကရိုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ မသွားချင်ကြဘူးမဟုတ်လား။ အဲ့ဒီနေ့အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဝတ်စုံတစ်စုံရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ MDS Myanmar ရဲ့ ဈေးသင့်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရရှိစေမယ့် ဝတ်စုံလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Zerla Front Tie Dress in Maroon Floral
Helzia Lace Dress in Nude
Marian Ruffled-Hem Dress in Oxblood
Payser Belted Dress in Black
Odine Ruffled Dress in Lavender
Adras Pleated Dress in Pink
Darlton Pleated-Hem Dress in Red
Aldos Ruffled Dress in Red
Marlin Contrast Dress in Oxblood
Pattie Drape Dress in Pink
12 POP-UP BAGS TO ADD FRESHNESS TO YOUR LOOK
No Comments on 12 POP-UP BAGS TO ADD FRESHNESS TO YOUR LOOK
ကိုယ့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကို လတ်ဆတ်သွားစေမယ့် POP-UP အိတ်ဆယ်မျိုး
It’s already 2020 and it’s time for you to go out of your comfort zone. So, if you are the type of person who likes to wear subtle OOTDs we recommend you to pair it withaflash of color.
2020 လည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ comfort zone ထဲကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ တစ်က ယ်လို့ ကိုယ်က သာမာန်ထက်ထူးခြားတဲ့ OOTD တွေဝတ်ဆင်ရတာကို သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ အရောင်တောက်တောက်လေးတွေနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ။
In this way, your fashion will be updated inagood way.
အဲဒီလိုသာ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ဖက်ရှင်ကလည်း ခေတ်မီသွားပါပြီ။
Without furtherado, here are 10 hand bags withapop-up of color you’ll love:
အများကြီးညွှန်းမနေတော့ပါဘူး။ pop – up color လေးတွေနဲ့ အားလုံးသဘောကျမယ့် အိတ် ဆယ်မျိုးကို ဖော်ပြလိုက်ပါပြီ။
NOT SLEAZY MATCHY-MATCHY OOTDs FOR V-DAY
No Comments on NOT SLEAZY MATCHY-MATCHY OOTDs FOR V-DAY
V-DAY အတွက် သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့ စုံတွဲဝတ်စုံတွေ
Valentine’s Day is almost near.
And if you and your partner are still contemplating on what to wear for Heart’s Day. We got you covered!
ချစ်သူများနေ့မှာ ဘာဝတ်သင့်တယ် ဘာမဝတ်သင့်ဘူးဆိုတာကို မိဘတွေက ချုပ်ချယ်ထားတုန်းလား။ OOTD က အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်တွေပေးချင်ပါတယ်။
Let our favorite couple, Theint Zar Maw and Thurayn Kyaw Moe inspire you on how to be fashion-forward with your matchy OOTD for Valentine’s Day.
OOTD MYANMAR ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံး စုံတွဲဖြစ်တဲ့ သိမ့်ဇာမော် နဲ့ သူရိန်ကျော်မိုး တို့ရဲ့ ဖက်ရှင်ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ စုံတွဲဝတ်စုံတွေကိုကြည့်ပြီး အိုင်ဒီယာတွေ ယူလိုက်ကြရအောင်။
LOOK #1 : Subtle camouflage
Photo credits to @theintzarmaw @thuraynkyawmoe
LOOK #2 : THE CLASSIC BURMESE OOTD
LOOK #3: STRIPES ON US
LOOK #4: RED + DENIMS+WHITE SNEAKERS
LOOK #5: PURPLE LOVE BIRDS
Now, we are sure you’ll be so cute with your OOTDs asacouple this Valentine’s Day. ချစ်သူများနေ့မှာ အချစ်တို့အားလုံး စုံတွဲ OOTD လေးတွေနဲ့အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းနေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Tags Fashion, ootdmyamnmar
BURMESE TRADITIONAL OUTFIT WITH SNEAKERS?
No Comments on BURMESE TRADITIONAL OUTFIT WITH SNEAKERS?
Photo credits @yunwnyuwn/ @theingimgmg
We usually see Burmese Traditional outfits paired with slippers or heels.
မြန်မာ့ရိုးရာဝတ်စုံတွေကို ဖိနပ်အပါးတွေ ဒေါက်တွေနဲ့ပဲ မြင်တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။
Photo credits @poe_mamhe_thar/ @burmesefairytale
But as Fashion evolves, we have come to see Burmese Traditional outfit paired with sneakers and boots.
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဖက်ရှင်အရ မြန်မာ့ရိုးရာဝတ်စုံတွေကို sneaker ဒါမှမဟုတ် boot တွေ နဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်မှုကို မြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။
Photo credits @LCYTN
Photo credits @pippa.cameron_
What’s your thought about this trend?
အချစ်တို့ရော ဒီ trend ကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
Tags Fashion, myanmar, ootdmyanmar
OUR FAVORITE LOOKS FROM GAULTIER’S FINAL SHOW AT HAUTE COUTURE WEEK IN PARIS
No Comments on OUR FAVORITE LOOKS FROM GAULTIER’S FINAL SHOW AT HAUTE COUTURE WEEK IN PARIS
“L’Enfant Terrible” of French fashion, Jean Paul Gaultier, marked his retirement aftera50-year career that has earned him international renown for his provocative designs and extravagant shows.
ပြင်သစ်ဖက်ရှင် ရဲ့ “L’Enfant Terrible” Jean Paul Gaultier က ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ
သာမာန်ထက်ထူးခြားတဲ့ ဖက်ရ​ှင်ပွဲတွေ ဖန်တီး​ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ နှစ်ငါးဆယ်ကြာ အောင်မြင်မှုတွေ တသီကြီးရပြီးနောက်မှာတော့ ဖက်ရှင်လောက ကနေ အနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
He sent out nearly 200 looks for his final couture catwalk, attracting fashion A-listers.
ဖက်ရှင်လောကရဲ့ ထိပ်တန်းမှာနေရာယူနေတဲ့သူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ဒီဇိုင်း ၂၀၀ နီးပါးကို သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးဖက်ရှင်ရှိုးပွဲမှာ ပြသခဲ့ပါတယ်။
“I love fashion,” Gaultier said backstage. “And I will continue withanew approach, takingabackseat.”
“ငါဖက်ရှင်ကိုချစ်တယ်” လို့ ပွဲရဲ့အနောက်ဘက်မှာကြည့်နေတဲ့ Gaultier က ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် “နောက်တန်းမှာနေရာယူရင်း နောက်ထပ် ချဉ်းကပ်မှုအသစ်တစ်ခုနဲ့ ဆက်သွားနေဉီးမယ်” လို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
Article appeared of CNN.com and minor edits were done.
ဤအကြောင်းအရာကို CNN.com တွင်ဖော်ပြထားပြီး အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
Photo credits to vogue.
Tags Fashion, international, jeanpaulgaultier, ootdmyanmar